Intel Cold War Hack - Cheats၊ Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
Intel Duty Black Ops ခေါ်ဆိုမှု: စစ်အေးတိုက်ပွဲ Hack
BO စစ်အေးတိုက်ပွဲနောက်ဆုံးတွင် INTEL ကို အသုံးပြု၍ စစ်မှန်သောဟက်ကာတစ်ယောက်ကဲ့သို့ချဉ်းကပ်နိုင်ခဲ့သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ COD Black Ops: Cold War Hack ရဲ့စွမ်းအားကိုသင်ခံစားချင်ပါသလား။ ၁ ရက်ကုန်ပစ္စည်းသော့ကိုယနေ့ဝယ်ပါ။
ငါတို့ရဲ့ cheat တွေကိုသုံးရမယ့်အချိန်ကိုကန့်သတ်မထားပါနဲ့။ ယနေ့တစ်ပတ်ကုန်ပစ္စည်းသော့ကို ၀ ယ်ပါ။
၎င်းသည်အထူးသီးသန့်ဟက်ကာများသာအသုံးပြုမည့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၁ လကုန်ပစ္စည်းသော့ကိုယနေ့ဝယ်ပါ။
BO စစ်အေးတိုက်ပွဲဟာငါတို့တွေ့ဖူးသမျှထဲမှာအကျော်ကြားဆုံး Call of Duty ထုတ်ပြန်ချက်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၄ င်းရဲ့စိတ်ရှုပ်မှုနှင့်ကိုက်ညီစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ INTEL စစ်အေးတိုက်ပွဲ Hack ကိုတီထွင်ခြင်းကသာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။ သင့်ရဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲပစ်မယ့် cheat မှဝင်ရောက်ခွင့်ရ!
Duty Black Ops ခေါ်စစ်အေးတိုက်ပွဲ INTEL သတင်းအချက်အလက်
Call of Duty ကစားသမားများသည်ဤ tool ကိုအလွန်အမင်းခံစားရမည်။ သင်၏ပြိုင်ဘက်များအားသင်လွှမ်းမိုးရန်လိုအပ်သည့်အင်္ဂါရပ်အားလုံးသည်ဤနေရာတွင်ရှိနေမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အမြင်အာရုံအသွင်အပြင်များ (Enemy / Friendly ESP၊ Enemy Distance နှင့် Visible Check) ကဲ့သို့သောရန်သူတည်ရှိရာနေရာကိုသင်အမြဲတမ်းသိပြီးသင်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေသင်ကိုင်တွယ်နိုင်လိမ့်မည်!
COD Black Ops: စစ်အေးတိုက်ပွဲ Intel Aimbot ဟာအရူးလုပ်နိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးဘယ်သူ့ကိုမှသုံးလို့မရပါဘူး။ ဒီနေရာမှာဒီဖြစ်စဉ်ကိုနားလည်ဖို့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ hack ဝါရင့်တစ်ယောက်ဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။ GamePron သည်သင်၏အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုမည်သည့်အရာထက်မဆိုထည့်သွင်းပေးလိမ့်မည်။
Intel CPU သာဖြစ်သည်(Bios Enabled တွင် Virtualization လိုအပ်သည်။ )
Hwid Spoofer ဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ Black Ops Intel Hack တွင်ဖော်ပြထားသောအံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးအင်္ဂါရပ်များအားလုံးကိုရယူသုံးစွဲပါ။ ယုံကြည်စိတ်ချရသော Aimbot မှသည် Wallhacks အထိဤအရာအားလုံးသည်သင့်အားမည်သည့်အရာနှင့်မျှဆက်သွယ်ခွင့်ပေးလိမ့်မည်။ ထိုချို့တဲ့သော COD စစ်အေးခေတ်ဟက်ကာများနှင့်လုံး ၀ မသက်ဆိုင်ပါနှင့်!
ရန်သူ / ဖော်ရွေ esp
FOV နှင့်ချောမွေ့စွာစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားသော Aimbot
စိတ်ကြိုက် key ကိုရည်ရွယ်သည်
အရိုးများအတွက်အရောင် esp palette
FOV ESP တွင်ဖွင့် / ပိတ်
တိုက်ပွဲ mode ကို
စစ်အေးတိုက်ပွဲ Intel အကြောင်း
COD Black Ops: စစ်အေးတိုက်ခြင်း Intel သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Call of Duty ပရိတ်သတ်များအားလုံးအတွက်ရိုးရှင်းသော (စိတ်ချရသော) hack ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါ cheat ပြည်တွင်းရေးဖြစ်ပြီး, သောကြောင့် "Streamproof" option ကိုကြောင့် streaming နေစဉ်ကိုသုံးနိုင်သည်! နာမည်ကအကြံပြုထားသည့်အတိုင်း၊ ဤရွေးချယ်မှုအတွက်တစ်ခုတည်းသောထောက်ပံ့သော CPU သည် Intel ဖြစ်သည် (သင်၏ BIOS တွင် Virtualization ကိုဖွင့်ထားရမည်။ ) ဒီ hack ကိုအသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း screen ကို full-mode ဖြင့်ကစားခြင်းသည်ရိုးရှင်းပါသည်။ ၎င်းသည်အခြား developer များကန့်သတ်လေ့ရှိသည်။
Cold War Intel ကိုဘာဖြစ်လို့အခြားထောက်ပံ့သူများထက်ပိုပြီးသုံးရတာလဲ။
အဘယ်ကြောင့်အွန်လိုင်းပေါ်တွင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဟက်ကာများကိုပံ့ပိုးပေးသူကိုသင်အဘယ်ကြောင့်မယုံကြည်သနည်း။ GamePron ကသုံးစွဲသူသည်သူတို့၏ကိရိယာများမှဘာကိုလိုချင်သည်ကိုနားလည်သည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤမျှတသမတ်တည်းပို့ဆောင်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အခြားပံ့ပိုးသူများကသူတို့၏ဖောက်သည်များအားအဓိကအနေဖြင့်ကူညီရန်ရုန်းကန်ကြရလိမ့်မည်၊ ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Call of Duty Black Ops အားလုံး - စစ်အေးခေတ်ဟက်ကာများသည်သင်၏ hacks / tools များမှအကောင်းဆုံးကိုတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည့်အတွက်စစ်အေးတိုက်ပွဲများကိုဂရုစိုက်မှုနှင့်အရည်အသွေးတို့ဖြင့်ကိုင်တွယ်လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ In-game menu သည်လူကြီးမင်းတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရှာဖွေရန်လူကြိုက်အများဆုံးအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် Call of Duty Black Ops: Cold War ကိုကစားနေစဉ်တွင် On-the-fly ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်နိုင်ရန်မှာဟက်ကာတစ်ယောက်အနေနှင့်အရေးကြီးသည်။ ဂိမ်းအသစ်များသည်အမြဲတမ်းခိုင်မာသောပြိုင်ဆိုင်မှုကိုပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းသင်တုန့်ပြန်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ COD Black Ops: Cold War Intel Hack ကိုသုံးနိုင်သည်။ သင်ကအများပြည်သူကစားသမားများကိုအနိုင်ရချင်သည်ဖြစ်စေ၊ ပုဂ္ဂလိကပွဲများကိုကစားနေသည်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့၏ In-game menu ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အနိုင်ရလိမ့်မည်။
A2 ။ မဟုတ်ပါ၊ သင်ဤလှည့်စားခြင်းဖြင့်စီးဆင်း။ မရပါ၊ ၎င်းသည်ကြည့်ရှုသူများအတွက်မြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
Q7 ။ cheat သည် Warzone mode တွင်အလုပ်လုပ်ပါသလား။
A7 ။ ဒီထုတ်ကုန် Multiplayer နှင့်ဖုတ်ကောင်များတွင်အလုပ်လုပ်တယ်။ WARZONE မဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်ုပ်တို့၏ COD Black Ops: Col War Hack ၏စွမ်းအားကိုသင်ကိုယ်တိုင်ခံစားလိုပါသလား။ ၁ ရက်ကုန်ပစ္စည်းသော့ကိုယနေ့ဝယ်ပါ။
သင့်ကိုကူညီရန်ရွေးနုတ်ဖိုးများကိုအားကိုးရန်သင်ငြီးငွေ့သည်ဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ်“ အခြားဘက်ခြမ်း” တွင်မည်သို့ဖြစ်ပျက်နေသည်ကိုသင်မြင်ချင်သည်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့၏ INTEL စစ်အေးတိုက်ပွဲကိုသုံးခြင်းကသင့်အားနည်းလမ်းတစ်ခုထက်ပိုပြီးအနိုင်ယူနိုင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
အဆင်သင့် စိုးမိုး စစ်အေးတိုက်ပွဲ INTEL Hack နှင့်အတူ?